Ama-Proteas abekelwe okunye ukushodelwa okukhulu kwi-innings yokuqala
MANCHESTER, ENGLAND - AUGUST 05: South Africa captain Faf du Plessis is bowled by James Anderson of England during day two of the 4th Investec Test between England and South Africa at Old Trafford on August 5, 2017 in Manchester, England. (Photo by Gareth Copley/Getty Images)
Amathuba ama-Standard Bank Proteas okunqoba umdlalo we-Test wesine ukuze kulingane i-series ngathi ayashabalele e-Old Trafford e-Manchester ngoMgqibelo njengoba bebheke ekushodelweni kwi-innings yokuqala okwesibili kwimidlalo elandelanayo.
Njengoba abashaya phezulu baphinde bahluleka ukuhlanganisa ama-runs, ama-Proteas aqede usuku eku-220/9 eshodelwa ama-runs angu-142.
Ngesinye isikhathi kubukeke sengathi kungakubi kakhulu ngaphambi kokuthi abashaya ekugcineni bethole inhlanhla okuhlanganisa ama-runs angu-74 ngaphambi kokuthi baphume.
Umdlalo ubulingene ngesikhathi u-Temba Bavuma, eshaya endaweni yakhe entsha u-No. 4, no-Faf du Plessis bedlulisa umphumela ku-100 kulahleke ama-wicket amathathu.
Kodwa u-Jimmy Anderson uyena umhleli wokubhubha kwama-Proteas. Ukhiphe u-Dean Elgar ngebhola lesithathu kwi-innings njengoba ama-Proteas aphinde ahluleka ukuqala kahle ngebhola elisha. Uphinde wabuya ukukhipha u-Bavuma no-Du Plessis emabholeni amathathu futhi wanezezela nge-wicket ka-Theunis de Bruyn.
Bonke abadlali be-England badlale indima, u-Moeen Ali uthathe ama-wicket amabili akade ewadinga ukuze afike kuma-wicket angu-20 kwi-series.
Ngaphambilini, i-England ikwazile ukubeka umphumela ongu-362 okucishe kudlule umphumela we-par ngo-60. Lokhu kwenziwe i-innings yokuhlasela yama-runs angu-99 (145 balls, 14 fours, 1 six) okuphuma ku-Jonathan Bairstow osebenze ngasekuphoseni nge-partnership yokugcina yama-runs angu-50 no-Anderson ohlanganise ama-runs amane kuphela.
u-Kagiso Rabada uphose kahle wathola izibalo ezingu-4/91 kuma-overs angu-26 futhi ebezothola eyesihlanu ukube u-Quinton de Kock akahlulekanga ukunqaka u-Bairstow.
SA ‘A’ edlale ngokuphelele ithole ukunqoba ngenye i-bonus point Maharaj uhamba phambili ekubekeni i-England phansi Ama-Proteas azimisele ekugcineni irekhodi elincomekayo India A ihlula i-South Africa A kumdlalo we-tri-series u-Philander ubeka isonto ‘elinzima’ emuva kwakhe u-Du Plessis uthemba sengathi isimilo sika-Elgar singagqugquzela abanye abashayayo u-Elgar ushaye ikhulu lesishagalombili ngaphambi kokuthi i-England inqobe ngama-runs angu-239 -Elgar no-Bavuma bayayivimba i-England u- Bavuma on esibindi ubheke umsebenzi kuphela - Zulu translation Bavuma no-Morkel bavimba i-follow on ngaphambi kokuthi i-England iqhubekele phambili u-Roland-Jones no-Stokes bahole i-England